Nidina ny vidin’ny lasantsy : tsy nihetsika ny vidin’ny gazoala | NewsMada
Nidina ny vidin’ny lasantsy : tsy nihetsika ny vidin’ny gazoala
Tsy hiantraika any amin’ny saran-dalana sy ny vidin-javatra ny vidin-tsolika. Tsy tena azo antoka anefa izany satria, miovaova isam-bolana ny vidin’ity farany.
Nidina, nanomboka omaly maraina, ny vidin-tsolika. Nihena 100 Ar ny lasantsy SP ka lasa 3.630 Ar ny litatra raha 3.730 Ar teo aloha. Nidina ho 2.230 Ar ny solitany fandrehitra raha 2.310 Ar ny teo aloha, nahitana fihenana 80 Ar. Tsy nihetsika ho 3.010 Ar kosa ny litatry ny gazoala.
Tsiahivina fa efa mihatra eto amintsika ny tena vidin-tsolika eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Anisan’ny fepetra iankinany ny vidin’ny barila (manodidina ny 40-50 dolara ankehitriny), ny sandan’ny Ariary miohatra amin’ny dolara, ny saram-pitateran’ny sambo.
Manapaka ny vidin-tsolika eto amintsika ny Ofisy malagasy mitantana ny vokatra ara-tsolika (OMH). Izany hoe, miankina amin’ny fanapahan-keviny ny vidiny tanterahin’ny mpaninjara solika, na eo aza fanalalahana ny tsena, sy ny fanarahana ny tena vidiny eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Tsy hita, araka izany, ny fifaninanana eo amin’ny mpaninjara solika.
Tsy nokitihin’ny OMH koa ny vidin’ny gazoala, midika fa tsy miantraika loatra any amin’ny saran-dalana ho an’ny olona sy ny entana.
Vitsy ny mpandeha
Azo antoka fa tsy hisondrotra koa, noho izany, ny saram-pitaterana, saika nandrangarangan’ny vondron’ny mpitatitra an-tanàn-dehibe (UCTU), satria nihoatra ny 3.000 Ar ny litatry ny gazoala. Saika nampiharin’izy ireo ny fiandohan’ny volana aogositra, nahemotra ny 26 septambra ary saika hanapahan-kevitra amin’ny 6 septambra ho avy izao indray.
Nambaran’ny mpamily zotra 152 iray (Amboditsiry-Tanjombato) fa “sarotra inoana ny hampiakaran’ny kaoperativa ny saran-dalana, satria na ny mpandeha aza, efa vitsy, sady fotoana fidiran’ny mpianatra rahateo izao”.
Nanodidina ny 6% ny fidangan’ny vidim-piainana nandritra ny enim-bolana voalohan’ny taona 2016. Anisan’ny tena nampiakatra azy ny vidin’ny saribao. Ankehitriny, tsy nihetsika firy ny vidin-tsakafo, satria mbola vao niakatra farany teo ny voka-bary vakiambiaty. Mora koa ny legioma sy ny anana. Manodidina ny 700 Ar hatramin’ny 900 Ar ny kilaon’ny ovy, tafidina hatrany amin’ny 350 Ar ny kapoakan’ny petit pois, raha 500 Ar teo aloha.